Raha araka ny fanazavan’ny mpisolovava an-dRavelonanosy anefa dia efa atahorana be ny fahasalaman’ity farany amin’izao. Miakatra be ny tosi-drany, marary ihany koa ny fony ary mivonto ny tongony. Ankoatra izay dia mihamahia andro aman’alina izy ankoatra ilay aretina diabeta laharana fahatelo efa mahazo azy.Efa in-telo nangataka ny hamoahana azy eny hotsaboana eny amin’ny hopitaly ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fonja raha ny fantatra saingy tsy mbola nahazo izany izy hatreto. Ahiana mafy araka izany ny ain-dRavelonanosy. Nambaran’ireo mpisolovava azy izay nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly fa ahiana misy tsindry ao ambadik’ity raharaha fitazonana an-dRavelonanosy any am-ponja ity. Efa ireo tompon’ny tany mihitsy mantsy hoy izy ireo no nanamafy fa izy no nanome procuration an-dRavelonanosy fa tsy nanao fanomezam-pahefana hosoka izany ity farany noho izany tsy misy antony tokony hitazonana azy any am-ponja intsony. Na izany aza dia hanohy hatrany ny fangatahana fahafahana vonjy maika ho an-dRavelonanosy izy ireo mandrapisian’ny fanadihadiana lalina.